Kooxda Khaatuma-xun ee Minnesota uga hawlgasha Ina Cumar Cismaan( JWXO-Shiil) iyo isku daygoodii Carqaladeynt ee Shirwaynaha Jaaliyada Ogadenia ee North America – Rasaasa News
Jun 12, 2009 Jwxo, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Kooxdan wadanka mareykanka looga yaqaano Cawro qaawan wadamada kallena loogaga yeedho Khaatumo-xun ee uu horboodo Axdi qabe Ina Cuman cusmaan ayaa waxey isku dayeen inay abaabulaan shirqool ay markii horre is ku dayahayeen inay ku baajiyaan shirka ayagoo dacwooyin ka dhan ah madaxda JWXO sidda Gudoomiyaha Eng. Salahdiin A. Macow iyo Hogaanka Arimaha jaaliyaadka iyo bulshada u gudbiyey hayadaha wadankan ee socdaalka.
Haddaba su,ashu waxaa weeye siddee ayey wax u maleegeen kooxda khaatuma xun?
Iney dacwooyin sameeyaan ka dhan ah Madaxda JWXO
Iney shirar hoose oo qaab-qabiil loo soo abaabuley isugu yimaadaan
Waxey qeybiyeen waraaqo ay ku sheegayaan inaan shirka la tagin
Waxey hawl-galiyeen dhawr odey oo aan lagu baranin cadaalad iyo danta guudtoona
Waxaan u soo qadaneynaa qodob-qodob sidda ay kooxdan cawro-qaawan u fashilantey, iyo sababaha soo dadajiyey fashilkooda.
1 Iney dacwooyin geeyaan ka dhan ah Madaxda JWXO kormeerka ku marahayey wadanka Mareykanka
Kooxdan oo uu horboodo Mr. Garaabo, ayaa waxey u tageen hay’ad ka mid aha hay’adaha danbiyada baadha ee wadanka mareyka ayagoo u sheegay in Gudoomiyaha JWXO Eng. Salahdin A/rahman Macow iyo Hogaanka Jaaliyaadka Col. A/weli Hussein Gas ay carqalad ku yihiin bulshada reer ogadenia ee ku nool gobolka Minnesota oo haddii loo ogolaado iney yimaadaan minnesota ay dhici karto khatar weyn. Hadaba waxaa is weydiin leh sidda ay kooxdani ugu fashilantey qorshaha koobaad ee dacwada. Dawladaha reer galbeedka iyo dunida ku dhaqanta democracyga dhaqan uma aha iney qof ama shaqsi aan waxba galabsanin la iska maago. Ragan wax dacweynaya ayaa waxey ka mid ahaayeen jawaasiistii tigreega u soo shaqeeyey, balse Jawaabtii ay heleen waxey noqotey hawshaas yaa idiin dirsadey illeen horaa loo yidhi aqoon la,aani waa iftiin la,aane. Nimankan oo uu horboodayo Mr. Huuraale(Garaabo), ayaa ayagu ku fashilmey nidaamkii ugu horeeyey ee dacwada iyo jaajuusnimada ahaa.
2 Iney shirar hoose oo qaab-qabiil loo soo abaabuley isugu yimaadaan kooxdan khaatuma-xun loo yaqaano ee taageerta ina Cumar cismaan
Waxaa dhacay in ay galeen shirar hoose oo fara badan oo ay damacsanaayeen iney ku fashilaan shirka Jaaliyada ee north America. Waxay diyaariyeen dhowr nin oo can ka ah meelaha lagu garaabeeyo oo aan sumcad ku leheyn bulshada raggas oo uu kamid yahay Ahmed rafle oo loo yaqaano( kabtanka walaaca iyo wal-walka), Cali Yare (cali saliid) iyo nin hilibka ka qala tuulada faaribool oo waayahan shaqadii laga soo ceydhiyey hilibkii uu qali jirey oo lagu magacaabo Cumar Gaab( oo aan soo qoridoono waxa uu yahay). Ahmed rafle (kabtan walaac) iyo Mr. Garaabo ayaa lagu arkayey suuqa weyn ee soomaalida ee mall 24ka iyo guryaha dhaadheer ee loo yaqaano public housing oo ay dagan yihiin duqeyda hawlgabka ah. Nimankan iyaga ah oo qaab qabyaladeed iyo naceyb qoys isu soo abaabuley ayaa waxay markii danbe u tageen Xusseen mataan (Shukumaan) oo dagan mid ka mid ah guryahan aan kor ku xusay. oo isagu heyb qabyaaladeed iyo ina cumar cismaan baa wax laga qaadayaa la xiiqsan kolkaasey ku yidhaahdeen Xusseenow waxaan dagaal kula jirnaa Qoyska reer Wafraa , ee waxaan kaaga baahanahay inaad arintaa iska kaashano; xusseen mataan markiiba intuu kor u dhawaaqey ayuu yidhi dhowr odey oo qoyskaad sheegteen ah ayaa arinkan inagula jira ee maxamuudow hawsha saas ha u dhigin, haddii kale nimankan ayaan waayeynaa. Arintaasna waxaa fashiley Shukumaan.
3 Waxey qeybiyeen waraaqo ay ku sheegayaan inaan shirka la tagin oo ay lee yihiin waxaa qortey hay’ad non profit ah
Marka koobaad hay’ada ay sheegteen waa hay ad aan wax qabanin, xafiis laheyn oo magaceeda la maqlo marka ay kooxdan Cawro qaawan shir qabsanayso.
Maba garanayaan in hay’ada ay sheeganayaan waxa loogu tala galey iyo waxa ay ku sheegayaan.
Waraaqihii markii la akhriyey ayaaba dad badani ugu horeysay maqalka shirka oo waxay u aheyd guul shirweynaha qabsoomintiisa.
Dadka ku sixiixnaa waraaqda oo ah dad aan waxna qorin waxna akhriyin oo magacooda la iska isticmaaley.
Tusaaale ahaan, Abdi dheere ( Abdi Buubaa) oo lagu yaqaano doqonimo iyo garasho la,aan waxa uu fuundi musqulaha jabiya mudo 30 sanno ah ka ahaa wadamada carabta, mana aha qof wax qori yaqaana ama akhrin yaqaana oo waa jaahil ay aqoon la,aantu ku gaamurtey. Ninkan kale ee kula sixiixnaa waraaqda waa Maxamed A. Dahir oo isagu sheegay inaan haba yaraatee lagala tashan waraaqdan shuqulna uusan ku lahayn qoraalkeeda. Taariikhda Abdi dheere (Buubaa) iyo maxamed Ahmed Daahirba oo aan ka hayno taariikh mug weyn gadaal ayaan idin kalla socodsiin doonaa.
4 Waxey hawl-galiyeen dhawr odey oo aan lagu baranin cadaalad iyo u shaqeynta danta guudtoona
Oday dhaqameed sidda xeerka iyo sooyaalka taariikheed ah waxaa weeye inuu dhex-dhexaad ka noqdo is jiidjiidka bulshada waxii xaq uu u arkana si cad u sheego oo geesinimo leh iskana ilaaliyo ka qeyb noqosho urur siyasadeed una noqdaan udub-dhexaad bulshada ay ka dhasheen. Hadaba Nimankan iskood isugu magacaabey odayaal oo aanaan maanta bulshada horteeda ka sheegeynin, balse ayagu u dhaartey ina cumar cusmaan muddo hada laga joogo 7 billood oo aan looga baranin dhexdhexaadnimo illaa mudadii loo dhaariyey iney khalad iyo saxba ku taageeraan kooxdam gabalkoodu sii dhacayo (Khaatuma xun) ayaa waxay bilaabeen dacaayado ka dhan shirweynaha Soomalida Ogadenia ee looga arin sanayey siddii aayo katalin buuxda loo gaadhsiin lahaa shacabweynaha S/galbeed Ogadenia. Nimankan la baxay magac ayna ab iyo odey u laheyn ee u soo xayd-xaytey kala qeybinta bulshada walaalaha ah dib ayaan iyana taariikhdooda idin kala socodsiin doonaa.
Isku soo wada duuboo, waxaa soo shaac baxey xaqii waxaana hal bacaad lagu lisey noqdey isku dayadii foosha xumaa ee kooxdan khaatuma xun maleegayeen. Gabagabadii shirweynahii soomaalida Ogadenia ee North America waxuu ku dhamaadey si guul iyo farxadi ku dheehan tahay. Waxaa dhabarka ka jabay kooxda Maxamed Cumar ismaan (JWXO Shiil) hogaamiyo oo iyagoo aad moodo dawacooyin sumeysan ayaa lagu arkayey hoolka shirka agagaarkiisa.